पा“च वर्षभित्रै देशको नेतृत्व गर्छुः बाबुराम
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई लामो समय युरोपको भ्रमणमा निस्किए । माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ शक्ति खोलेका पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा उनीसँगै आएकाहरु धेरै अलग भए । पूर्व प्रशासक तथा चिन्तकको समूहले पनि साथ छाडेपछि नयाँ शक्ति केही कमजोर भएको आँकलन गरिरहँदा उनीभने पार्टीको अहिलेको नतिजाबाट सन्तुष्ट छन् । युरोपपछि अमेरिकाको यात्रामा जान लागेका भट्टराईले तनहुँस्थित अन्नपूर्णकर्मी पवन पौडेलसँग पार्टी, माओवादी र संघीयताबारे आफ्ना धारणाहरु राखे । कुराकानीका क्रममा पार्टी र भावी नेतृत्व सम्भावनाबारे कुरा गर्दा निकै आत्मविश्वासी देखिएका उनीसँगको कुराकानीको अंशः
साताभन्दा लामो समय युरोप यात्राबाट के अनुभव लिएर फर्कनुभयो ?
साउन ६ देखि २३ गतेसम्म युरोपका आठवटा देशको भ्रमण गरेर फर्कें । त्यो मेरो मुलतः अध्ययन भ्रमण नै थियो । अहिले हामी समृद्धिको मुद्दामा अघि बढिरहेका
छौं । समृद्धि हाम्रो मुलमन्त्र बनिरहेको छ । विश्वको इतिहासमा युरोपेली देशहरु समृद्धिको बाटोमा गएका
छन् । अरु देशहरु के कारणले अघि बढे र हामी के कारणले पछि प¥यौं भनेर जान्नु थियो । मेरो भ्रमण निकै फलदायी रह्यो ।
तपाइंको भ्रमणको सिकाई कस्तो रह्यो ?
विकास र समृद्धि भनेको त्यसै आकाशबाट खस्ने रुखबाट फल टिपेजस्तो चिज होइन । मान्छेको परिश्रम र मेहनतबाट नै त्यो प्राप्त
हुन्छ । र, प्रत्येक देशका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । त्यसलाई ख्याल गर्ने र मुख्य रुपमा जनतालाई सचेत बनाउने, श्रमशील बनाउने र राज्यले उचित नियमन गरे देशको उचित विकास हुँदो रहेछ । त्यसो हुन सकेन भने हुँदो रहेनछ भन्ने मैले बुझें । रुसको अनुभव हेर्नुस्, स्विडेनको हेर्नुस्, फ्रान्स, लक्जेमबर्ग वा बेल्जियमको अध्ययन गर्दा मैले त्यो पाएँ । तत्कालीन माओवादी शक्ति, जसले सशस्त्र संघर्ष ग¥यो र त्यसैको आधारमा गणतन्त्र आयो भनेर तपाइंहरुले भनिरहनुभएको छ, तपाईंलाई युरोपको समृद्धि हेर्दाखेरि त्यो युद्ध सहि थिएन भन्ने कुनै बिन्दुमा लाग्यो ?
मलाई युद्ध ढिलो भएछ भन्ने लाग्यो । सानो भएछ, कम भएछ भन्ने लाग्यो । मलाई पश्चाताप होइन मलाई त गर्व छ र पुगेन भन्ने लाग्यो । त्यो अपुरो रह्यो, अधुरो रह्यो र हलाल क्रान्ति भयो । यसैले गर्दा समृद्धिमा ढिलो भयो भन्ने मलाई लाग्यो । युरोपमा जत्ति क्रान्ति कहाँ भयो होला ? फ्रान्समाजत्ति क्रान्ति कहाँ भयो होला ?
त्यहाँ दशौं लाखले ज्यान गुमाए । रेन अफ टेरर भन्ने शब्दावली त्यहींबाट उत्पत्ति भएको
हो । अहिले धेरै साथीहरुले पश्चाताप गर्नुस् भन्नुहुन्छ, म उहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाइं पेरिस जानुस् र त्यहाँ राजा र रानीलाई काटेर गाडेर स्मारक बनाएको ठाउँमा हेर्नुस् ।
त्यहाँ मानिसले गएर सम्मान गर्छन् । त्यहाँका विभत्स लडाइंका चित्रहरु हेर्दा तपाइंको आङ अहिले पनि सिरिङ्ग हुन्छ । र, त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएपछि चेतना आएर त्यहाँ समृद्धि आएको हो ।
तर तपाइंको सोचमा परिवर्तन आएको हो भन्छन् नि ?
मेरो सोचमा परिवर्तन कुन अर्थमा हो भने संसारै परिवर्तनशील छ । चेतना नै परिवर्तन हुन्छ । जसले परिवर्तनशील हुँदैन भन्छ, त्यो मान्छे नै होइन । ढुंगो र माटोचाहिं परिवर्तित हुँदैन । त्यो पनि ढिलो परिवर्तन हुन्छ । मान्छे, प्राणी, विवेक र चिन्तन भनेको निरन्तर गतिमा हुन्छ । त्यस आधारमा मैले पछिल्लो ज्ञानलाई पछ्याएर अघि बढ्ने गर्ने प्रयत्न
गर्दैछु । तपाइंले आजकल जुन धारणा र विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो तपाइं पहिले लडेको पार्टीभन्दा फरक विचार राख्ने नेपाली कांग्रेससँग निकट देखिएको छ, नि ! भन्न त पाइन्छ । मानिसको मुख छेक्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको म सम्मान गर्छु ।
तपाइं कांग्रेस र कम्युनिष्टको मात्र किन कुरा गर्नुहुन्छ ?
मान्छे कांग्रेस र कम्युनिष्ट मात्र भएर जन्मन्छ ? यो जिन हो ? महिला र पुरुष हो ?
हामी यस्तो सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट भनेको हिजो शित युद्ध कालमा राष्टिूय मुक्तिको बेलामा दोश्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको हो । पुँजीवादीको पक्षमा रहेको शक्तिलाई कांग्रेस भनियो भने अर्को साम्यवादको प्रतिनिधिलाई कम्युनिष्ट भनियो । यो २० औं शताब्दीको कुरा हो । अब २१ औं शताब्दीमा दुवै धार अपूर्ण रहे । तिनको चक्र पुरा भयो । तिनको चक्र पुरा
भयो । अब नयाँ धारको नयाँ शक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो । त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्टको दुई धार हैन कि त्यो भन्दा माथि उठेको तेश्रो धार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तपाईले यही नयाँ शक्ति बनाउने भनेर सोच लिएर पुरानो माओवादी पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो तर गएको चुनावको नतिजाले वैकल्पिक शक्ति बन्ने तपाइंको चाहना पुरा गर्ने छाँट देखाएन नि ! सोचमाचैं तपाईं अगाडि तर सांगठनिक हिसाबले बाबुराम कुशल संगठक सावित हुन सकेन भनिन्छ नि ! अनि बच्चाचैं जन्मदैमा दौडन थाल्छ ? मलाई भन्नुस् उसले चक्रबाट गुज्रनु पर्छ कि पर्दैन ?
त्यसकारण जुन सत्य विचार, सत्य वा विज्ञान जन्मन्छ, त्यसलाई स्विकार्न मानिसलाई गाह्रो हुन्छ, समय लाग्छ । जीवनको चक्रजस्तै राजनीतिक शक्तिको पनि विकासको चक्र हुन्छ । हामी ठिक दिशामा छौं । म दुई वर्षको प्रगतिबाट सन्तुष्ट छु । जुन अनुभव मैले विश्वमा गएर अनुभव गरें । सबै देशमा हिजोका पुँजीवादी र साम्यवादी धारका आधारमा २१ औं शताब्दिमा विभक्त भएर बस्नु ठिक छैन भन्ने नयाँ विचारको खोजी भएको मैले पाउँछु । त्यस अर्थमा पनि नयाँ शक्तिको भविष्य छ । र, हामी सहि दिशामा छौं भन्ने मेरो विश्वास बढेको छ । तर जो माओवादीबाट तपाइंसँग आउनुभएको थियो, धेरैजसो फर्कनुभयो । अन्य कतिपय क्षेत्रबाट आएकाले पनि साथ छाडे नि !
बिरुवा हुर्कंदा पुराना पात र बोक्रा झर्छन् । नयाँ पलाउँछन् । पलाएको पनि तपाइंले हेर्नुप¥यो नि । बोक्रा झरेको हेर्नुहुन्छ कि नयाँ पलाएको त्यो तपाइंको कुरा हो । हामी त नयाँ पलाउँदै गएको देखेका छौं । पुरानो पात झर्दै जानु त नौलो होइन ।
नयाँ शक्ति थाल्दा नीतिगत अथवा व्यवहारिक कुनै कुरामा त्रुटी भयो भन्ने तपाइंलाई
त्रुटी त जेमा पनि हुन्छ । तर मुलरुपमा हामी सहि छौं । कतिपय कुरा सिक्दै जानुपर्छ । नयाँ आविष्कार र विकास भनेको प्रयोगमा गएर नै
हुनेछ । त्यसैले हामी प्रयोगमै छौं । त्यसक्रममा कतिपय कमी कमजोरी भएका छन् । त्यसबाट सिकेर जानुपर्छ र जनताको बीचमा झांगिनुपर्छ । रोपेको विचारको बिउलाई झ्यांगिन दिन अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ । जनताका बीचमा जानुपर्छ, बुझाउनुपर्छ र संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यस अर्थमा हामी सिक्न सधैं तयार छौं र विनम्रतापूर्वक अघि बढ्छौं ।
तपाइंले नयाँ शक्तिको भविष्य छ भन्नुभयो । र, अबको १० वर्षमा तपाईंको पार्टी नेपालको राजनीतिमा कुन ठाउँमा पुग्ला ?
दश आठ वर्ष त टाढाको कुरा भयो । म त पाँच सात वर्षभित्रै देशको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रुपमा उदय हुन्छ भन्ने ठान्छु ।
कार्यकारी राष्ट्रपति बन्छु भन्ने सोच तपाइंमा छ ?
मै बन्नु परेन । तर कार्यकारी राष्टूपतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । जनताले जसलाई चुनेर पठाउँदा पनि हुन्छ । त्यसले देशमा दिगो राजनीतिक स्थिरता र शान्ति ल्याउँछ । त्यसैले विकासको ढोका खोल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि म नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर कार्यकारी राष्टूपतिय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नयाँ शक्ति तपाइंले भनेजस्तै उच्चतम बिन्दुमा पुग्यो भने अहिलेका अरु शक्तिको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?
हैन अरुबारे हामीले किन चिन्ता लिने ? एउटा नयाँ उदय भएर जान्छ भने अरुले पनि प्रतिष्पर्धी बनाएर आफूलाई लगे भने तिनको अस्तित्व रहन्छ । सकेनन् भने उनीहरु बिलय भएर जान्छन् । अरुको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो विकास गर्ने र देशलाई विकल्प दिने र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हाम्रो चाहना हो । सम्भवतः सबैभन्दा बलियोमध्येको अवस्थामा अहिलेको सरकार छ ।
सरकारका हालसम्मका कामको समीक्षा गर्नुपर्दा यो कुन स्थितीमा छ ?
नेपालमा लामो समयपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । मान्छेले धेरै अपेक्षा पनि गरे । भर्खरै सरकारले चुनाव भएको समेत गन्दा १० महिना
भैसक्यो । यो स्थितीमा हेर्दा आशा भन्दा पनि निराशा बढी पैदा भएको देखिन्छ । सरकार दलभित्रका मानिस र आम जनता दुवै निराश छन् ।
कतै पनि आशाको दियो देखिनुपर्ने हो देखिइराखेको छैन । एउटा दुःख पनि मलाई लागिरहेको छ । हामीलाई के लागेको थियो भने आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने पुराना मित्रहरुको सोच र चिन्तन पुरानो भैसक्यो वा समयानुकुल विकास गर्न सक्नुभएन भन्ने त लाग्थ्यो । तैपनि एउटा कम्युनिष्ट ब्राण्ड पपुलर भएको हुनाले उहाँहरुले जित्नुभएको थियो । केही समय त लानुहुन्छ भन्ने
लाग्थ्यो । तर यदि छिटै उहाँहरुको ओरालो यात्रा शुरु भयो ।
सरकारको त्रुटीचैं के भयो त ?
मुख्यतः वैचारिक रुपमै उहाँहरुको त्रुटी भयो । समयानुकुल आफूलाई विकास गर्न उहाँहरुले सक्नुभएको थिएन । हिजकै स्टालिनवादी ढाँचाको सोच बोकेर अहिलेको विश्वमा न लोकतन्त्रको संरक्षण र विकास हुन सक्छ न देशमा एकता कायम गर्न सकिन्छ । नत विकास र समृद्धि दिन सकिन्छ न नै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले बुझेकै थियौं । वैचारिक चिन्तनमै उहाँहरुको मुख्य समस्या
हो । त्यसबाहेक व्यवहारिक हिसाबमा पनि उहाँहरुको समस्या देखियो । सुशासन र सदाचार कायम राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर थोरै भए पनि विकास निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । बलात्कारका घटना रोकेर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्थ्यो यो पनि नसक्नुचैं हाम्रो वा मेरो निम्ति पनि आश्चर्यको विषयचाहिं भएको छ ।तत्कालीन माओवादीको मुख्यमध्येको एक एजेण्डा संघीयता र तपाई त्यसको मुख्य
व्यवहारिक रुपमा हेर्दाखेरि संघीयता टिक्दैन भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेका छ । करनीतिको पनि आलोचना भैरहेको
छ । संघीयताको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?
अत्यन्त राम्रो छ । योबिना देशले राष्टिूय एकता पनि कायम गर्न सक्दैन र समृद्धि पनि हासिल गर्दैन भन्ने मेरो दृढ मत छ । तपाइंले कर आदिका कारण यो असफल हुन्छ भन्नुहुन्छ यो बिल्कुल गलत कुरा हो । शुरु शुरुमा भर्खर बजेट प्रयोग भएको छ । एक महिना मात्र भएको छ । नजानेर पनि कतिपय त्रुटी भएका छन् । शुरु शुरुमा बच्चा हुर्काउँदा बढी खर्च गर्नुपर्छ । झोल पदार्थ खुवाउनु परेन । सुत्केरी अवस्थामा बच्चालाई खुवाउँदा खर्च भयो भनेर बच्चा नजन्माउने कुरा त भएन । त्यसकारण संघीयता असफल भएको होइन । यसलाई ठिक ढंगले लालनपोषण गर्नमा सत्ताधारीको सोचमा कमजोरी भएको हो ।
प्रदेश सरकारको भूमिका खास प्रभावकारी देखिएन । भारतको अभ्यास हेर्दाखेरि केन्द्रमा केन्द्र सरकार छ । स्थानीय सरकार पनि शक्तिशाली छ । प्रदेश सरकारको खास भूमिका देखिएन र भूमिका लिन पनि सकेन
नि ! त्यस्तोचाहिं होइन । हामीले तीन तहको अभ्यास ग¥यौं । यो नयाँ अभ्यास पनि हो । त्यही पनि संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेशलाई नि बलियो बनाउनुपर्छ ।
तर शुरुमाचैं अहिले जो नेतृत्वमा भएकाहरुको जुन केन्द्रीयतावादी चिन्तन छ, त्यसले गर्दा पनि उहाँहरुले कैयौं अधिकारहरु हस्तान्तरण पनि गर्न चाहिरहनुभएको छैन । प्रदेशमा काम गर्ने मानिसहरु पनि पुरानै पार्टीका छायाँ व्यक्तिहरु मात्र भएकाले जति कार्यशक्ति प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । तैपनि यस्ता त्रुटीलाई सच्याउन सकिन्छ । हामीले प्रदेशलाई नै बलियो बनाउनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, तपाइं युरोप पनि घुमेर आउनुभयो । अब अमेरिका जान लाग्दै हुनुहुन्छ, किन ?
यो एउटा मेरो मिसन नै
हो । नेपालको समृद्धिको साँच्चै जग बसाल्ने हो भने ज्ञान तथा विज्ञानलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यो योजनाअन्र्तगत नै हामी हिंडेको हो । युरोप, अमेरिका र पूर्वी एसिया यी तीन केन्द्रमा गएर प्रत्यक्षरुपमा अनुभव हासिल गरेर आउँदैछु ।